Tolotra masombom-pitsaboana, saron-tava fitsaboana, saron-tava tsara indrindra avy any China Manufacturer
Description:Saron-tava,Saron-tava fitsaboana,Saron-tava tsara indrindra,saron-tava mirehitra,,
Home > Products > Saron-tava
Ny vokatra avy amin'ny Saron-tava , mpanofana manokana avy any Shina, Saron-tava , Saron-tava fitsaboana mpamatsy / orinasa, vokatra avo lenta avoakan'ny Saron-tava tsara indrindra R & D sy ny famokarana, manana ny tolotra lavorary lavorary isika ary fanohanana ara-teknika. Miandrandra ny fiaraha-miasanareo!
Vidin'ny orinasa Saron-tava medikaly amidy lafo kalitao  Contact Now
Sarom-pitsaboana ambongadiny 4 sosona landihazo 100%  Contact Now
PM2.5 KN95 Mask manosika masika Miaro isan'andro  Contact Now
Fanafody masombokony ho an'ny fahasalamana manokana  Contact Now
50 pcs Masika Famonoana endrika manosotra 3-Ply  Contact Now
Sofina miloko sofina mampientam-boly Mask  Contact Now
Masky fanaovam-panavotana ho an'ny vovoka sy ny fiarovana  Contact Now
Mask madika fitsaboana mety tsara  Contact Now
10 Masinina matihanina azo ekena matihanina Pcs  Contact Now
Sarotra sarotika endrika miafina ho fiarovana  Contact Now
Sarotra mason-tarehy natokana ho an'ny fiarovana -50pcs / boaty  Contact Now
Endri-javatra saron-tarehy: 1.Telo sosona fiarovana, sivana mahomby. Rafitra mitambatra marobe, sosona arovan'ny fiarovana, sivana manimba, manakana sy manivana ny karazana loto rehetra amin'ny rivotra, miaro ny fifohana rivotra. 2....
Endrika masika: 1. Telo sosona fiarovana, fanorana mahomby. Trano fitambaran-tsipika maro be, tohodrano miaro ny sosona, manivana manimba, mahomby ary manivana ny karazana loto rehetra amin'ny rivotra. 2.Face mason-koditra Sariaka, fofonaina,...
Ny saron-tava fiarovana miaro amin'ny fitsaboana dia mety amin'ny fiarovana ny mpiasan'ny mpitsabo sy ny mpiasa mifandraika amin'ny aretina taovam-pisefoana voan'ny aretin'ny rivotra. Izy io dia karazan-tsindrim-panidiana...
Ny saron-tava momba ny fitsaboana medaly dia matetika vita amin'ny sosona iray na maromaro. Ny dingana lehibe amin'ny famokarana dia ahitana ny rivotra mitsoka, spunbond, rivotra mafana na acupuncture, sns. Izy ireo dia afaka manohitra ny...
Torohevitra momba ny saron-tarehy: fonosana : 50pieces / boaty Ny lamba PP vaovao tsy lamba , ny lamba dia mazava, malefaka, mifoka rivotra sy mahazo aina. Drafitra lafatra telo, habaka famonosana tarehy dia manamora ny fifohana rivotra Plastika...
Shina Saron-tava mpamatsy
1. Ny telo ao amin'ny lamba vita afovoany tsy vita tenona dia vita amin'ny fitaovana antibacterial tsy organika, izay afaka mitana andraikitra antibacterial sy Deodorizing.
2. lamba vita amin'ny polypropylene avo lenta, lamba miendrika matevina telo-sosona.Ny sosona anatiny dia mandrafitra lamba mampitony, malefaka ary tsy mahasosotra, izay ahafahana misoroka ny fanaintainana sy ny fikoronana.
3. vita amin'ny fitaovana mora tohina, malefaka, mahazo aina ary tsy mahasosotra
4. Ny fanetanana sisin'ny sisin'ny ultrasonika dia afaka mandrakotra ny orona, vava ary ny vava, manome fiarovana tanteraka. Ny masonay dia manome antoka ho an'ny fahasalamana sy fiarovana amin'ny asa ary rehefa mivoaka ianao.
Ambony fonosana: 50 saron-tava tsy voaroy
Saron-tava Saron-tava fitsaboana Saron-tava tsara indrindra saron-tava mirehitra Saron-tava 100%